Waxba ma ahan wixii software aad isticmaasho, isagoo garanaya ka tuuryo ugu weyn keyboard hubaal ka dhigaysa in ay fududahay in la isticmaalo iyo sidoo kale idinka Koriya waqti badan in geeddi-socodka. VLC Media Player kama duwana. Gaar ahaan, haddii aad na jecel inay keyboard ka badan isticmaalaan badan jiirka oo kale, oo aad jeclaan lahaa kuwaas oo tuuryo in aanu ku saabsan in aan idinla wadaago in this post yihiin. Isticmaalka teebabka kuwaas oo si dhab ah ku dari kartaa in aad wax soo saarka iyo sidoo kale waqti isku mid ah ka samaysaa xiiso leh si ay u isticmaalaan VLC maalin si ku salaysan maalin.
Toobiye 1: Play / hako isticmaalaya furaha Space Bar
Play iyo hako jira shaki la'aan ah aad u aasaasi ah oo labo ka mid ah hawlaha ugu isticmaalay marka aad isticmaalayso VLC Media Player oo si VLC si ay u fududahay dadka isticmaala ay u siiyey hawlaha ay u muhiim ah oo ugu weyn oo ugu cad aad keyboard - Bar Space ah . Sidoo kale waa run in badan ciyaartoyda warbaahinta kale, Space Bar waa furaha default u Play iyo hako hawlaha.
Toobiye 2: Toggling dhexeeya Screen ku Full iyo hab Window
Aynu idinku ayaa dhamaantood la dhigay saaxiibadaa si aad u daawato filim aad u jecel yahay oo kaliya doonayso inaad ugu bedesho VLC u hab Screen Full, waxaad u baahan tahay in lagu dambe raadinaya mouse, si fudud riix furaha 'F' ah. Waxay kuu ogolaaneysaa in aad toggle u hab Screen Full on VLC la hal-saxaafadeed.
Toobiye 3: Sida loo beddel ratio Aragti
Ma doonaysaa in la beddelo si width ah oo kala duwan, oo sarajooggeeduna aad video, jaraa'id fudud ee 'A' muhiimka ah. Waxaa sii dayn doonaa inaad tijaabiso saamiga kala duwan oo dhinaca sanyihiin in VLC Media Player iyo sidaas oggolaadaan in aad dooro ugu wanaagsan ee mid ka mid iyaga ka mid ah. Tani waxaad badbaadin kartaa waqti badan oo ka kaaftoomi ee raadinaya fursadaha menu ee interface ka.
Toobiye 4: Sida loo beddelo Mode Zoom ah
Waa sahlan mar kale u kala bedesho ee hababka zoom kala duwan laga heli karaa VLC; kaliya aad u leeyihiin in ay wax miiran ah 'Z' oo muhiim ah si ay si dhakhso ah gudaha iyo dibadda video ah in hab suuqa kala Mozilla.
Toobiye 5: Sida loo soo gudbiyo si dhakhso ah oo gaabis ah - Alt + Left Arrow / Alt + Xaqa Arrow
Waad ka boodi kartaa seconds dhowr video iibsan si fudud adiga oo riixaya Alt key oo ay la socdaan muhiim ah jihada ka / muhiimka ah fallaadhiina waxay ka jihada (u socdeen / weeraryahanka) in aad jeclaan lahayd inay u boodboodaan (midig weeraryahanka oo tagay u socdeen). Press kasta inuu seegi doono 10 ilbiriqsi oo aad video.
Toobiye 6: Sida loo degdeg ah Forward Dhexdhexaad - Ctrl + Left Arrow / Ctrl + Xaqa Arrow
Si aad u boodboodaan daqiiqo in video ah, waxaad leedahay oo keliya si ay ugu bedesho Alt furaha Ctrl iyo toobiye la mid ah hadda ka boodi doonaa hal daqiiqo, halkii ay 10 ilbiriqsi oo aad video, mar kasta oo aad wax miiran isku darka.
Toobiye 7: Sida loo degdeg ah Forward Long - Ctrl + Alt + Arrow Left / Ctrl + Alt + Xaqa Arrow
Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad ka boodo in ka badan hal daqiiqo ama 10 ilbiriqsi oo aad video? Waa sahlan tahay in la sameeyo, waxay leeyihiin oo kaliya inay wada isticmaalaan Alt iyo furayaasha Ctrl leh xukunka Left / Right Arrow inay u boodboodaan 5 daqiiqo mar. Tani waxay sidoo kale waa sida ugu fiican ee aad samayn karto furaha toobiye sida loogu gefo ka badan 5 daqiiqadood hal mar, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho birta ku dooni on interface ka.
Toobiye 8: Sida loo kordhaan ama yaraadaan Volume isticmaalaya toobiye ah - Ctrl + Up Arrow / Ctrl + Down Arrow
Badaneyso ama ay yaraaneyso mugga aad video sidoo kale waa furaha kaliya dhowr iska on VLC, si fudud wax miiran isku dhafan ee muhiimka ah Ctrl iyo 'Up' ama 'Down' muhiim ah arrow si loo helo heerka mugga la doonayo. Tani waxay noqon gaar ahaan waxtar u leh kuwa aan haysan laptop ah furaha jirka ah ee ay gacanta ku mugga karo.
Toobiye 9: Ma doonaysaa in carrab ciyaaryahanka - jaraa'id M
Ma badan oo in la yidhaahdo oo arrintan ku saabsan, waa arrin sahlan sida ay heli kartaa, riix furaha M iyo aad xidhi karaa / un-carrab aad video wakhti kasta.
Toobiye 10: Sidee si ay ula qabsadaan saamaynta Audio / Video ku VLC - Ctrl + E
Waxaa jira saamaynta badan (audio iyo video) farqiga midabka, barbaraha iwm laga yaabaa in aad rabto in aad la qabsato ka dib markii aad bilowday ciyaaro aad maqal ah ama video , kulli wixii aad u baahan tahay inaad samayso si aad saamayn aad rabto waa saxaafadeed Ctrl muhiim ah oo ay la socdaan E kaas oo aad u keeno suuqa kala Audio / Video Saamaynta ay ku VLC Media Player. Hadda, waxa aad sameyn kartaa isbedelka la doonayo sida aad raalli.
Toobiye 11: Sidee in ay hubiyaan waqtiga (Haray iyo dhibtu) - jaraa'id T
Si ka duwan hab Window ah, marka in ay hab Screen Full aadan heli si aad u aragto waqtiga (haray iyo tagey) by default, waxaa jira toobiye ah, inkastoo si aad u hesho macluumaadkan; si fudud ku dhuftay muhiim ah oo ku saabsan T aad keyboard si 3-info labaad dhinaca gacanta midigta sare oo ka mid ah hab Screen Full.
Toobiye 12: Sida loo Play dhakhso / keydka birta - saxaafadeed + ama -
Ma rabtaa in aad u ordaan video ah in hab Fast ama gaabis ah in uu yahay korodhka ama hoos u xawaaraha aad video loo maqli karo, jaraa'id fudud + ama - oo muhiim ah in la kordhiyo ama u yaraado.
Toobiye 13: Sida ay u wareegaan inay wax soo socda ama hore ee playlist ah - jaraa'id N ama P
Ciyaaro waxyaabaha kala duwan iyada oo ku playlist ? Ma doonaysaa inay u boodboodaan ka mid item in kale? Waxaad ku gaari kartaa adigoo si fudud adiga oo riixaya N, (waayo, ciyaaro item soo socda) ama P (u ciyaaro item hore) ee muhiimka ah.
Toobiye 14: Sida loo joojiyo loo maqli ah - jaraa'id S
Simple, laakiin qaar badan oo inaga mid ah la ogaado in Haddii aad rabto in aad joojiso video ah in la ciyaaray sabab kasta, oo kulli wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa saxaafadeed fure S iyo in uu joojiyay video isla markiiba ku VLC Media Player.
Toobiye 15: Sida loo qarin ama kontoroolha Unhide - Ctrl + H
Tuuryo waxay u saamixi doontaa in aad xakameeyo VLC dhow buuxda oo aan haysan si ay ku xiran tahay gui ee dhan. The furayaasha toobiye kor ku xusan si dhab ah u samayn karaa iyadoo la isticmaalayo VLC waayo-aragnimo xiiso leh.
> Resource > VLC > 15 VLC tuuryo aad qabto in aad ogaato!